विश्वमा कोरोनाबाट ४ लाख बढीको मृत्यु,कुन देशमा कति ? - betanadaily.com
विश्वमा कोरोनाबाट ४ लाख बढीको मृत्यु,कुन देशमा कति ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ समय: ३:०५:३०
बेलबारी । विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या ह्वातै बढेको छ । हाल सम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख नाघेको छ ।
वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार आइतबार बिहानसम्म कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख १ हजार ९६४ पुगेको छ । विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या भने ७० लाखनजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म ६९ लाख ७० हजार ६३० पुगेको वर्ल्डो मिटर्सले जनाएको छ । कुल सङ्क्रमितमध्ये ३४ लाख १० हजार ९९४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
यो निको हुनेको संख्या ज्यान गुमाउनेको भन्दा साढे ८ गुणा बढी हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर १ लाख २६ हजार बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ४ हजार १ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा १ लाख १२ हजार ९६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको संख्या भने १९ लाख ८८ हजार ५४४ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ७ लाख ५१ हजार ८९४ भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ११ लाख २४ हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १७ हजार २१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी संक्रमित हुनेमा ब्राजिल पर्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ लाख ७३ हजार ५८७ पुगेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुेको संख्या ३५ हजार ९५७ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ३ लाख २ हजार पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ ३ लाख ३५ हजार बढीको कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ८ हजार ३१८ को अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
रूस पनि कोरोनाभाइरसको नयाँ हटस्पट रूस बनेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ४ लाख ५८ हजार ६८९ मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने ५ हजार ७२५ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये २ लाख २१ हजार बढी पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ २ लाख ३१ हजार बढीमा कोरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये २३ सयको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाले भयावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । अहिलेसम्म स्पेनमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ८८ हजार ३९० पुगेको छ । स्पेनमा कोरोनाका कारण २७ हजार १३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये १ लाख ९६ हजार ९५८ भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ६२ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ६ सयको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा बेलायत पर्छ । अहिलेसम्म बेलायतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४० हजार ४६५ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या भने २ लाख ८४ हजार नाघेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत अहिले एसियाकै महामारी केन्द्र बनिरहेको छ । एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसक संक्रमितहरू भारतमै फेला परेका छन् । भारतमा पछिल्लो समय दैनिक संक्रमित संख्या र मृत्यु संख्या झन् बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म भारतमा २ लाख ४६ हजार बढी संक्रमित भएका छन् । कोरोनाका कारण ६ हजार ९४६ जनाको ज्यान गएको छ । संक्रमितमध्ये १ लाख १८ हजार बढी पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ १ लाख २० हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
कारोनाभाइसकका कारण धेरै मृत्यु हुनेमा इटाली पनि पर्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३३ हजार ८४६ पुगेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २ लाख ३४ हजार बढी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये १ लाख ६५ हजार पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले इटालीमा ३५ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ भने २९३ को अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा भने अहिले ६७ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । त्यहाँ ७८ हजार ३२९ जना भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८३ हजार ३० जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । चीनमा कोरोनाका कारण ४ हजार ६३३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा पनि अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार २ सय ३५ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ३६५ जना पूर्णरूपमा निको भएका छन् भने १३ जनाको ज्यान गएको छ ।